Anyị niile maara na ịrịọ onye ọrụ ibe ma ọ bụ onye ọ bụla mgbaghara adịghị mfe. N'isiokwu a, anyị na-enyere gị aka ịchọta okwu ziri ezi iji rịọ mgbaghara email.
Mee mgbanwe iji chekwaa mmekọrịta gị
Na ndụ ọkachamara gị, ịnwere ike ịrịọ onye gị na ya na-arụkọ ọrụ mgbaghara, n'ihi na ị gaghị enwe ike ịga ihe omume ha, n'ihi na ị kpasuru mkparị ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla ọzọ. Ghara imebi ihe ma mee ka gị na ya nwee mmekọrịta onye otu a, ọ dị mkpa iji nlezianya họrọ okwu gị ma dee ozi ọma wee tụgharịa nke ọma.
Nke a bụ ndebiri email maka ịrịọ mgbaghara maka onye otu ibe m maka omume ọjọọ ma ọ bụ nke na-ekwesịghị ekwesị:
[Aha nke onye ọrụ ibe],
Achọrọ m ịrịọ mgbaghara maka omume m na [ụbọchị]. Emere m ihe ọjọọ, mụ na gị emee ihe ọjọọ. Achọrọ m ime ka o doo anya na ọ bụghị àgwà m ime ihe dịka nke a nakwa na nrụgide nke ọrụ a na-ejikarị emetụta m.
Ana m akwa ụta maka ihe merenụ ma mesie gị obi ike na ọ gaghị eme ọzọ.
Template Email iji rịọ onye ọrụ ibe ya mgbaghara August 26th, 2020Tranquillus
gara agaEmail template igosipụta nkwenye
-esonụTemplate Email maka ịrịọ mgbaghara maka onye nlekọta